dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka. Marka 1:4
Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory hetra raha nandre, dia nanamarina an’Andriamanitra, satria natao batisa tamin’ny batisan’i Jaona izy. Fa ny Fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nanda ny fikasan’Andriamanitra, satria tsy mba nanatona hataon’i Jaona batisa izy. Lioka 7:29-30
Ny batisan' ny Fanahy Masina
Fitenenana in fiteny
Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ny fiainam-baovao. Romana 6:4
dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina. Titosy 3:5
Izaho dia manao batisa anareo amin’ny rano ho amin’ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo. Matio 3:11